Nchịkọta Ohere: Ngosipụta ihu njirimara nke GNU / Linux | Site na Linux
Kemgbe mmalite nke GNU / Linux, ojiji na iche-iche nke Eserese eserese eserese (GUI) dị adị na-eto. N'otu oge ahụ, ụfọdụ asọmpi etolitekwala n'etiti ndị ọrụ, ndị ọhụụ na ndị nwere ahụmahụ, maka nke kachasị mma n'etiti ọtụtụ nhọrọ dị ugbu a.
Otú ọ dị, ugbu a nhọrọ dị site na GUI maka GNU / Linux, nke ahụ bụ, na Njikwa Window (Ndị njikwa Windows - WM, na Bekee) kasị ewu ewu ma ọ bụ nke a maara nke ọma, na-abịakarị agwakọta n'ime nke a maara nke ọma na nke zuru oke Gburugburu Ebe Obibi (Ebe Desktọpụ - DE, na Bekee) ebe ọtụtụ ndị ọzọ, dịka ọ dị mma, mana ikekwe amachaghị ma ọ bụ ji ya eme ihe, na-abịakarị n'adabereghị na a Ebe obibi Desktọpụ akọwapụtara.
Ka anyị cheta na, n'etiti a Ebe obibi Desktọpụ na a Njikwa windo enwere otutu ihe doro anya mgbe ana ekwu okwu banyere a GNU / Linux Sistemụ nrụọrụ.
Nke mbu, o kwesiri ka a mata ịdị adị nke X Windo Sistemụ (X Windows, na Bekee), nke A na-ahụta ya dị ka isi nke na-enye ohere ịse ihe eserese na ihuenyo. Dị ka, X Windows na-enye nkwado na-enye ohere ngagharị nke windo ahụ, mkparịta ụka ya na kiiboodu na òké, ma na-adọta windo ndị ahụ. Ihe a niile dị mkpa maka desktọọpụ ọ bụla.
N’iburu nke a n’uche, anyị nwere ike ịmatakwu na ọ bụ a Njikwa windo na a Ebe obibi Desktọpụ.
1 Njikwa windo
2 Desktop gburugburu ebe obibi
3 Ndị nlekọta windo na gburugburu Desktọpụ
3.1 Gbasara otu Desktọpụ Environment
3.2 Nwere onwe ya na gburugburu ebe nrụọrụ Desktọpụ
Ọ bụ mpempe ihe mgbagwoju anya nke na-achịkwa ntinye na ọdịdị nke windo. Nke ahụ chọrọ X Windows ịrụ ọrụ ma ọ bụghị site na a Ebe obibi Desktọpụ, nke iwu n'ụkpụrụ. Na dị ka ArchLinux Official Wiki, ke ikpehe ya raara onwe ya nye «Ndị njikwa Windows«, Ndị a na-ekewa n'ime ụdị 3, nke bụ ihe ndị a:
Na: Ndị na-egosipụta ọdịdị na arụmọrụ nke Windows na OS X, ya mere, na-ejikwa windo dị ka mpempe akwụkwọ na desktọọpụ, nke enwere ike ịdọrọ otu n'elu nke ọzọ.
Ụlọ: Ndị nke ụdị "mosaic" ebe windo anaghị ekpuchi, na ebe a na-enwetakarị ụzọ mkpirisi igodo, na enweghị ntụkwasị obi n'iji òké enweta.
Di omimi: Ndị na-enye gị ohere ịmegharị windo nke windo n’etiti mosaics ma ọ bụ sere n’elu.
Desktop gburugburu ebe obibi
Ọ bụ ihe mmewere ma ọ bụ usoro ihe ejikọrọ karịa a Njikwa windo. Ya mere chọrọ ha abụọ X Windows dị ka a Njikwa windo, na-arụ ọrụ. Kedu ihe kpatara ọtụtụ ji etinye nke ha na / ma ọ bụ jiri otu WM ma ọ bụ karịa nwere onwe ha rụọ ọrụ nke ọma.
Na mgbakwunye, ọ dị mkpa iburu n'obi na a Ebe obibi Desktọpụ n'ozuzu ya gụnyere ngwa nke ngwa ejikọtara ọnụ ka ngwa niile mara ibe ha, dịka, ụdị nke ụdị ogwe (taskbar) nke na-eme ka arụ ọrụ ụfọdụ dị ka itinye obere mmewere (wijetị) maka ime ngwa ngwa ma ọ bụ ozi maka ịkwalite ahụmịhe onye ọrụ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere Gburugburu Ebe Obibi, anyị na-akwado ịgagharị ihe ndenye anyị dị na mbụ:
Ndị nlekọta windo na gburugburu Desktọpụ
Gbasara otu Desktọpụ Environment
Mgbachi: Site na GNOME
ntamu: Site na GNOME Shell
KWIN: Site na KDE na KDE Plasma
XFWM: Site na XFCE
Muffin: Site na Cinnamon
Mmmmmmmmmmmm: Site na Deepin
gala: Site na Pantheon
BudgieWM: Site na Budgie
UKWM: Si na UKUI
Nwere onwe ya na gburugburu ebe nrụọrụ Desktọpụ
Nnukwu WM: https://awesomewm.org/
Igbe ojii: https://github.com/bbidulock/blackboxwm
Ihe omuma: http://www.enlightenment.org
Igbe ozi: http://www.fluxbox.org
EgwuregwuBoxEbe nrụọrụ weebụ: https://www.yoctoproject.org/software-item/matchbox/
Igbe mepere emepe: http://openbox.org/wiki/Main_Page
Window Onye kere: https://www.windowmaker.org/
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere «Gestores de Ventanas», dị ugbu a n'ime ma ọ bụ n'èzí a «Entorno de Escritorio», nke ahụ bụ, n'ụzọ dabere ma ọ bụ n'ụzọ onwe nke otu n'ime ndị a, nwere nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Ndị na-ahụ maka Ohere: Ngosipụta eserese eserese maka GNU / Linux
Ozi na-akpali mmasị. Anụla m banyere ụfọdụ ndị njikwa windo mana ndepụta ị nyere dị ezigbo mma. Daalụ.
Zaghachi nwata salinas maldonado
Ekele m, Juvenal. Daalụ maka okwu gị. Obi dị anyị ụtọ na ozi ahụ masịrị gị nakwa na ọ bara uru.
Jonathan Injinia Sistemụ dijo
Di ma ọ bụ nwunye bụ ezigbo desktọọpụ, achọpụtara m na ọ dị ịtụnanya maka laptọọpụ ochie m na pc na desktọọpụ m, na laptọọpụ ochie m m jiri ubuntu nkịtị wee rie 6-7% nke nhazi ahụ, ebe ọ nọ na onye ọ bụla na-ata ahụhụ 1-2. % Nhazi ahụ riri obere, na desktọpụ m pc Ubuntu nkịtị riri 2-3% nke nhazi ahụ, ebe na Ubuntu nwunye ya riri 0.5-1% nke processor, na okwu ole na ole Ubuntu na gburugburu ebe obibi riri obere cpu nke ukwuu laptọọpụ ochie m 64 bit 2012 dị ka ryze 8 desktop pc.
Zaghachi Jonathan Injin Injinia
Ikwuru, oriri ahụ dị ntakịrị ma ọ mepee ngwa ngwa, ana m eji ya otu izu ma enwere m olileanya na ọ ga-aga n'ihu
Zaghachi Bryan Vicente Urquiza
Elizabeth onyekachukwu dijo
Obi dị m ụtọ maka onye òtù ọlụlụ, agbanyeghị na enweghị mgbatị dị ka gburugburu ebe ndị ọzọ, ọ na-enye m ihe m chọrọ, ụfọdụ nhazi mmezi dị mfe, mana n'ọnọdụ ezigbo ọsọ mgbe m mepee ngwa, na mgbakwunye inwe obere nhazi ihe oriri na ebule ebule, obu ezie na na ncheta ebule echegbughi m onwe m banyere inwe 8gb nke ebule, mana obere ihe oriri ya hapuru m ihunanya, 0.5% na-ezu ike mgbe obula, anwaala m gburugburu ndi ozo ma ha ruru 3-4% dị ka gnome shei na kde plasma ruru 2-3% ebe di na nwunye dị ala karịa 0.5% WOWOWOWOWOW, na m na-anwale ya maka ihe karịrị ọnwa 8 na desktọọpụ desktọọpụ m ma ọ nwetụbeghị m nsogbu nsogbu, ana m ele vidiyo na youtube na ọ dị egwu amaghị m Ọ bụ mmiri niile dị ka ọ kwesịrị ịdị, ihe nke rapaara na gnome na otu maka kde plasma.
Zaghachi Elizabeth montana
Mario na-enweghị isi dijo
Nwunye bụ ngwa ngwa echeghị m na ọ ga-agbanwe gburugburu ebe m nwere ọdịdị dị mma, emekwara m ya n'ihi etu o si dị ngwa, m meghere google chrome ma meghee na 1 nke abụọ ọsọ ọsọ, otu maka ọtụtụ obere mmemme M na-eji maka mmepe m.
Zaghachi Mario triviño
Ọnye na -bụ Jean Carlos Granda? dijo
MATE DESKTOP ENVIRONMENT dị oke mma, ihe niile kwụsiri ike na enweghị m nsogbu ọ bụla, ọ dịkwa ịpị ọsọ ọsọ ma ngwa gị emegheela, maka ndị na-anwaghị ya, mee ya, ọ ga-aba uru.
Zaghachi Jean Carlos Granda
Enwere m mmasị na agba akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na gburugburu ebe obibi nwere hehe maka mkpali nke sitere na ahịhịa, enwere m mmasị na gburugburu ebe a enwere m ya site na ryzen 7 desktop pc maka afọ 3 ma kwenye m na ọ dị oke ọsọ, na-ejigide obere oriri ya, Enwere m nsogbu na gburugburu ebe ndị ọzọ, mana enwere m obi ụtọ na m nwere nke a dị ka isi, n'ụzọ m si jiri ubuntu kemgbe 2013 na m na-eji ubuntu mate kemgbe 2018 dị ka isi.
Zaghachi Francisco Diaz
M na-eji fedora na SPING DE MATE, ọ bụ ezie na na mbụ m nwere nsogbu, mgbe ahụ, edozi ya ma ruo ugbu a, m na-eme nke ọma, gburugburu ebe a dị oke ọsọ.
Zaghachi Steven Carrion
Anọgidere m na-eji ya maka ọnwa 7 ma ruo ugbu a ọ na-enye m ezigbo nsonaazụ maka ihe m chọrọ.
Zaghachi abraham vizcarra
hapu kde plasma maka gburugburu ebe a, a na m eji ya na debian m anaghi aju maka ozo.
Zaghachi Alejandro Rodriguez
Leonard garcia dijo
Aga m etinye nwuntu ubuntu ka m mara ma odi mma.
Zaghachi ledoardo garcia
Imelite sistemụ ma ọ bụrụ na ị nwere onye ọlụlụ ubuntu, gaa chọọ "Mmelite ngwanrọ" ebe ahụ ma ọ bụrụ na ị nweta mmelite nye ya wụnye ma mgbe ịmechara ị ga-agbanye usoro ahụ, itinye mgbanwe ndị ahụ.
Zaghachi Eduardo Medina